Shirkadda Diyaaradaha Itoobiya oo kordhineysa duullimaadyada Kenya - BBC News Somali
Shirkadda Diyaaradaha Itoobiya oo kordhineysa duullimaadyada Kenya
Shirkadda diyaaradaha ee Itoobiya ayaa sheegtay duullimaadyada ay diyaaradaheeda ku tagayaan dalka Kenya
Shirkadda diyaaradda Itoobiya oo duulimaadyadeeda Kenya kordhineyso
Ra'isal wasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed markii uu dhawaan booqasho ku tagay Kenya heshiiska uu la gaaray madaxweyne Uhuru Kenyata ayaa keentay in la kordhiyo duullimaadyada ay shirkadda ku tagto Kenya.
Xilligii ay labada hoggaamiya kulmeen ayaa waxay ku heshiiyeen laga billaabyo 24-ka bisha Juunyo 2018, ay magaalada dalxiiska ee Mombasa ay maalin walba ku tageyso duulimaad laba jeer ah.
Shirkadda diyaaradaha Itoobiya waxay magaalada Nairobi duullimaad ku tagtaa maalin kaste.
Dhinaca kale labada hoggaamiye waxaa kale oo ay heshiis ku gaadheen in la sii daayo macabiista Itoobiyaanka ah ee ku xiran xabsiyada dalka Kenya, sida uu sheegay afhayeen u hadlo wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya.
Ilaa iyo haddana safaaradda Itoobiya iyo laanta Socdaalka ee kenya ayaa waxay ku howlan yihiin diyaarinta maxabiista Itoobiyaanka ah iyo sharcigii ay ku safri lahaayeen howshaa markay dhammaatana dalkooda dib loogu celinayo.
Dowladda Itoobiya waxay horaan ay xabsiyada Suudaan iyo Sacuudi Carabiya uga sii deysay muwaaddiniin Itoobiyaan ah oo ay tiradoodu gaadheyso 2,400.
Carruur harraad ugu dhimatay deegaanno hoostaga Ceelwaaq
Faah-faahin ka soo baxaysa qaraxyo ka dhacay dalka Equatorial Guinea
TOOS Maamulka magaalada Jigjiga oo qaaday Koobka gobollada deegaanka Soomaalida
Dib u milicsashada 30-kii daqiiqo ee ugu dambeysay nolosha George Floyd